dia misy ny filokana ao portland oregon
firy ny poti ve ianao manomboka eny amin'ny tany blackjack
firy ny poti-manao dia hanomboka avy amin'ny tany blackjack
firy ny poti ve ianao manomboka eny amin'ny tany texas holdem
desert harena 2 maimaim-poana slot
famolavolana ny reconfigurable slot tandrok'ilay
Evans filazana tsy dia zava-dehibe amin'ny DC manana voalohany-izay tompon-daka tombony eo amin'ny mpiara-monina, fa midika izany fa kely bettors rehefa misy mifaninana tsena varavarana manaraka izay afaka manolotra ny tsara kokoa mifanohitra dia misy ny filokana in phoenix.
Fa Intralot ny kajikajy dia mifototra amin'ny avo-mihazona ny modely izay mety hihazona ny 20 ka hatramin'ny 30 isan-jato ny rehetra wagers, fa noho ny teny mafy-dimy isan-jato Las Vegas sy ny hafa vao nifehy ny tsena arizona. Inona Ny Manaraka?Ny talata, ny DC Filan-kevitry ny hihaino ny famakiana faharoa ny volavolan-dalàna, ka noho izany dia misy—, fara fahakeliny, ara-poto-kevitra — sehatra ho an'ny fiovana tao ny tari-dalana.
Araka ny tahirin-kevitra hita amin'ny alalan'ny LegalSportsReport, Intralot no nilaza fa mety hiteraka hatramin'ny 30 heny noho ny fanjakana noho ny misokatra modely mety dia misy ny filokana ao portland oregon. Mandritra izany fotoana izany, ny fitenin ' ny volavolan-dalàna mamela ny mety ny nampihetsi-po ny open-tsena modely amin'ny ho avy raha ny Intralot fiaraha-miasa no tsy manaporofo fa mahomby firy ny poti ve ianao manomboka eny amin'ny tany blackjack.
Modely io dia tsy fifaninanana ary dia manolotra ny ratsy mifanohitra mba bettors. Fa na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra vitantsika ny inoana lobbying atao alliance mpandraharaha sy ny fanatanjahan-tena tary, ny DC fanatanjahan-tena hilokana ny volavolan-dalàna manome tombon-dahiny ny tokan-tena-mpandraharaha modely ary dia tanana ny ampihimamba ho an'ny rehetra wagering ao anatin'ny distrika ny loteria mpandraharaha, Intralot firy ny poti-manao dia hanomboka avy amin'ny tany blackjack. Amin'ny Distrikan'i Columbia mijoro eo amin'ny cusp ny ara-dalàna fanatanjahan-tena betting, amin'ny DC Filan-kevitry ny efa nampoizina nitranga ny volavolan-dalàna mifehy ny tsena ao amin'ny talata firy ny poti ve ianao manomboka eny amin'ny tany texas holdem. Ankoatra izany, LegalSportsReports-kevitra fa Intralot ny vinavina dia disingenuous — na dia rehefa izy ireo dia ahitsy ho an'ny souped-up vig — satria izy ireo tsy misy ho an'ny outlay-barotra ny fandaniana desert harena 2 maimaim-poana slot. Fa maika fepetra ihany koa ny talata ny fandaharam-potoana izay mety hahatonga ny volavolan-dalàna ho lasa lalàna saika avy hatrany.. Virginia — toy ny DC ny trano filokana-tsy ny fanjakana ihany koa ny mijery ny ara-dalàna ny fanatanjahan-tena betting, ary noho izany dia mety tsy ho ela dia hanana fahafahana tena tsara hisambotra DC ny tsena famolavolana ny reconfigurable slot tandrok'ilay.